Young Warriors stun hosts Zambia to reach Cosafa final; Zimbabwe to face South Africa - NewZimbabwe.com Young Warriors stun hosts Zambia to reach Cosafa final; Zimbabwe to face South Africa - NewZimbabwe.com
Young Warriors striker Delic Murimba (right)
Young Warriors stun hosts Zambia to reach Cosafa final; Zimbabwe to face South Africa
The Triangle United forward’s second-half strike completed Zimbabwe’s comeback after the hosts had earlier looked on course for the final when they took the lead on 37 minutes through star striker Prince Mumba.
The match was played at a furious pace and swung from end-to-end, but it was Zimbabwe who found the winner as Murimba netted his fourth of the campaign to join Mumba and South Africa’s Lyle Foster at the top of the scorers list.
Bekithemba Ndlovu’s charges will now tackle South Africa in Thursday’s final at the same venue, which will kick-off at 1530 hours while Zambia tackle Angola in the third-place play-off match.